Sinoa 38 tonga omaly Averina any Addis Abeba indray
Kaominina Antananarivo Vaky tanteraka ny adin’i Naina A sy Clémence R
Tsy mety ilay mampiasa ity fanomezana ity ho an’ny fomba amam-panao politika tsy madio. Mila manaraka tsara ny fepetra napetraky ny fanjakana,
Tontolon’ny serasera Haino aman-jery Radio katolika iray norahonana hakatona
Nahazo fandrahonana avy amin’ny fanjakana tamin’ny alalan’ny Talem-paritry ny serasera sy ny Kolontsaina any Vatovavy Fitovinany ny Radio Katolika Mazava Atsinana na ny Radio Rakama.
CNARP Tohanana ara-pitaovana mba hamokatra fanafody betsaka kokoa
Misy ireo fanafody novokarin’ny Cnarp ( Centre National d’Application des Recherches Pharmaceutiques) manasitrana ny sotrir’aretina mifanakaiky
Ketrika.com Efa manao « livraison » manakaiky hatrany ny mpanjifa
www.ketrika. com fantatry ny besinimaro amin’ny anarana hoe « ketrika » dia tsy mena mitaha amin’ny hafa tokoa, raha ny eo amin’ny sehatry ny varotra an tserasera na ny « vente en ligne » no resahana.
Fitokonana sy fitakiana Mafana ny toe-draharaha any amin’ny faritany
Nilahatra nitety tanàna ary avy eo nitokona nanoloana ny lapan'ny tanànan'i Toamasina avokoa omaly maraina ireo mpitondra tuk tuk any an-toerana.
Haino aman-jery Manabe fa tsy mampiala voly fotsiny
Amin` izao fihibohana izao dia ny haino aman-jery, indrindra ny televiziona, no sakaizan` ny isan-tokantrano.
Raha efa naaton’ny fanjakana hatry ny ela ny sidina mivantana mampifandray amin’i Chine, dia mbola nisy Sinoa 38 tonga teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato tonga tamin’ny sidin’ny Ethiopian Airlines omaly.
Heverina ho mpanamboatra ny kianja Barea etsy Mahamasina hanampy ireo efa eto izy ireo. Mihorohoro hatrany ny vahoaka noho i Chine loharano nipoiran’ny Coronavirus. Na efa somary voafehy aza ny coronavirus any Chine, dia izy ireo hatrany no mitana laharana be indrindra amin’ny olona maty, izay efa 3130, arahin’i Italie akaiky izay 2978 sahady hatramin’ny omaly.
Atao ahoana marina ?
Atoka-monina na atao “mise en quarantaine” ve ireo sinoa ireo? Azo antoka ve ny fahasalamany ? Raha tsia dia efa nifanosina tamina olona sy mpandeha hafa maro. Etsy ankilany, niparitaka tamin` ny tambajotra serasera tao anaty andro vitsivitsy lasa izay ny filazana fa mitondra tsimokaretina “coronavirus” ireo mpiasa sinoa miisa 17 mirahalahy handray anjara amin` ny fanatanterahana ny fanamboarana ny kianjan` ny BAREA etsy Mahamasina hatrany. Rehefa natao ny fanadihadiana dia nanaraka ny fepetra napetrakin` ny fitondrana malagasy ireo sinoa hanampy isa ireo ary efa am-perinasa hanafaingana ny asa etsy amin` ny kianjan`i Mahamasina, raha ny fanazavana. Natoka-monina nandritra 14 andro izy ary efa tsy misy ahiana intsony fahasalaman` izy ireo taorian` ny fanaraha-maso ny tsirairay, raha ny fanomezan-toky. Nambara mantsy fa misy mpitsabo manara-maso isan’andro avy amin’ny Minisiteran’ny fahasalamana. Arahin’ny governemanta sinoa maso amin’ny alalan’ny “puce” amin’ny finday, ary nahazo alalana avy any vao afaka tonga teto Madagasikara. Vaovao tsy mitombina no naely entina handemena ny sain` ny olom-pirenena ny filazana fa mitondra ny tsimikaretina COVID-19, hoy ny tompon’andraikitry ny orinasa China State Construction Overseas Development (CSCOD). Nanamafy moa ny manam-pahefana Malagasy fa tsy ahitana trangana Coronavirus ireo sinoa etsy Mahamasina ary tomombana ara-pahasalamana izy ireo, ary antonony tsara ny maripanan’ireo sinoa 17, hoy ny fanazavana.
Haverina any amin’ny niaingany
Halina ihany dia nitety haino aman-jery sy nampita vaovao ny talen’ny serasera eo anivon’ny fiadidiana ny repoblika Rtoa Rinah Rakotomanga ary nanambara fa averina any Addis Abeba izay toerana niangany sy nahatongavany teto Madagasikara ireo Sinoa miisa 38; izany no natao dia mba hampisinda ny ahiahy hoe sao dia ireto Sinoa vao tonga ireto sanatria no hampiditra ny Coronavirus eto Madagasikara.Tsy izahay mpitondra fanjakana mihitsy no hampidi-doza ny firenena hoy i Rinah Rakotomanga ka izay no nahatonga io fanapahan-kevitra io.Tsapa amin’ny zava-mitranga fa miasa ao anatin’ny fikoropahana ny fitondram-panjakana ary misafotofoto be ihany ny fomba fanapahan-kevitra.
Marigny A. sy Toky R